Qufullada Australia waxay wax ka qabanayaan soo kabashada safarka gudaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Qufullada Australia waxay wax ka qabanayaan soo kabashada safarka gudaha
Airlines • Airport • Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Soo kabashada degdegga ah ee gudaha Australia waxay halis ku noqon kartaa kiisaska oo sii fidaya, iyo xiritaanka xadka oo la kordhiyo, in kasta oo la xoojinayo baahida gudaha ee H1 2021.
Qufullada iyo xidhitaanka xuduudaha gobolka ayaa lagu wadaa inay daciifiyaan oo hoos u dhigaan soo kabashada safarka gudaha.
Diyaaradda Qantas oo shaqaalaheeda hoos u taagan waxay calaamad u tahay rajada waddo dheer oo soo kabasho ah.
Kororka caabuqyada ayaa dhabar jab ku ah meheradaha dalxiiska.
Iyadoo Australia la dagaallamaya kororka kiisaska COVID-19, safarka gudaha ayaa aad hoos ugu dhacay. In kasta oo soo -kabashada gudaha ee Australia ay ku xoog badnayd H1 2021, dib -u -soo -kicinta qufullada iyo xidhitaanka xuduudaha gobolka ayaa u noqon doonta dharbaaxo, oo waxay u jihaysan tahay inay daciifiso oo hoos u dhigto soo kabashada safarka gudaha. Intaa waxaa dheer, Qantas diyaaradda oo shaqaalaheeda hoos u taagan waxay calaamad u tahay rajada waddo dheer oo soo kabasho ah.
Soo -kabashada gudaha ee deg -degga ah ee Australia waxay halis ku noqon kartaa kiisaska oo si xawli ah u socda, iyo xiritaanka xadka oo la kordhiyo, in kasta oo la xoojinayo baahida gudaha ee H1 2021. Saadaasha warshadaha ee ugu dambaysa waxay rajaynaysaa in safarka gudaha uu dib ugu soo laabto 93.8 milyan oo safar 2021, oo ku soo noqonaya 80.4% safarada kahor COVID (2019), laakiin kala duwanaanshaha delta ayaa caqabad ku noqon kara soo kabsashadan xooggan ee la filayo. Australia waxay hormuud u ahayd in la xakameeyo COVID-19 oo leh heerar caabuq oo aad u hooseeya iyo xannibaadyo safar oo caalami ah oo adag, kiisaska la hayo.
Kordhinta cudurrada ayaa horseedaysa dharbaaxo ku timaadda meheradaha dalxiiska, oo hadda ku tiirsan socdaalayaasha gudaha illaa ugu yaraan badhtamaha 2022, marka xuduudaha caalamiga ah dib loo furi karo. Haddii qufulku sii jiro oo kalsoonida socotadu hoos u dhacdo, dalabku wuu yaraan karaa, soo kabashada gudaha ee Australia waa la dheerayn karaa.
Xayiraadihii ugu dambeeyay ayaa gaajooday warshadaha dalxiiska ee Australia ee ganacsiga, iyo shirkadda diyaaradaha ee ugu weyn dalka - Qantas - ayaa bilaabay inay dareento qaniinyada iyadoo hoos u dhigtay 2,500 oo shaqaale ah.
Ka soo kabashada Qantas waxay diiradda saartay waddooyinka gudaha oo xuduudaha caalamiga ah si weyn loo xiray. Xamuulku wuxuu bilaabay inuu la kulmo soo kabasho macno leh, inkasta oo kororka kiisaska uu noqday mid dhibaato leh. Hoos -u -dhaca deg -degga ah ee safarada gudaha iyo fidinta filashooyinka qufulka ayaa hoos u dhigay rajadii rajada ee side. Tallaabooyinka deg -degga ah ee Qantas waxay yareyn doontaa culeyska maaliyadeed ee lumitaanka taraafikada waana inay gacan ka geysataa sidii loo ilaalin lahaa jiritaanka mustaqbalka ee diyaaradda. Si kastaba ha ahaatee, dib u soo kabashada ayaa hadda laga yaabaa inay yaraato mar haddii xayiraaduhu kor u kacaan maadaama ay waqti qaadato in shaqaalaha la soo celiyo waxayna yareyn kartaa dadaallada ballaarinta.
Australia waxay ka gaabisay tallaalka muwaadiniinteeda sababtoo ah heerka kiisaska oo hooseeya. Si kastaba ha noqotee, tani waxay keenaysaa caqabad waxayna dib u dhigi kartaa dib -u -soo -noqoshada baahida rakaabka haddii kalsoonida socotada ay bilowdo inay garaacdo.
Tallaalku wuxuu kor u qaaday kalsoonida ummadaha kale wuxuuna bilaabay inuu xoojiyo soo kabashada safarka. Iyada oo horumarka tallaalku kooban yahay, Australia ayaa ka dambaysa waddamada kale. Heerarka tallaalka oo hooseeya, dadka socotada ah ayaa laga yaaba inay diidaan inay safraan tallaalka la'aantiis maaddaama halista hadda korortay. Sidaa darteed, soo kabsashada ayaa hadda dib loo dhigi karaa ilaa barnaamijka tallaalku soo ururiyo xawliga oo socotada Australiya ay mar kale isku kalsoonaadaan.